कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको १३० औं जयन्ती सम्पन्न | literature कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको १३० औं जयन्ती सम्पन्न | literature
We have 1335 guests and 219 members online
Content View Hits : 35808612
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको १३० औं जयन्ती सम्पन्न
Special: 1 photo: काठमाडौं- कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको १३० औँ जयन्ती मनाईएको छ।
Kabisiromani Lekhnath Poudyal's 130th birth anniiversary was celebrated in Kathmandu on December 30, 2013. Photo: Nai Prakashan
पुष १५ (डिसेम्बर ३० तारिख) सञ्चारग्रामस्थित लेखनाथ पौड्यालको पूर्णकदको सालीकमा लेखनाथ पौड्याल काव्यसभाका संयोजक प्रा. राजेन्द्र सुवेदीले माल्यार्पण गरेर भावपूर्ण श्रद्दान्जली ब्यक्त गरे।
सोही अवसरमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रतिष्ठानका संयोजक प्रा. ठाकुर पराजुलीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बालकृष्ण सम फाउन्डेशनका संयोजक प्रा.डा. गार्गी शर्माले नाट्यसम्राट् बालकृष्ण समका पूर्णकदको सालीकमा माल्यार्पण गरेर भावपूर्ण श्रद्दान्जली ब्यक्त गरे।
त्रिमूर्ति निकेतनद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा बक्ताहरुले त्रिमूर्ति अर्थात् कवि शिरोमणि, नाट्य सम्राट र महाकविले देखाएको बाटोमा हिँड्नु नै त्रिमूर्तिप्रतिको सच्चा श्रद्धान्जली हुने बताए।
निकेतनका अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाई र सदस्यसचिव नरेन्द्रराज प्रसाईले सम्बोधन गरेका थिए।
कार्यक्रमको सञ्चालक यादव भट्टराईले गरेका थिए।
कार्यक्रममा उषा शेरचन, भुवनहरि सिग्देल, बाबा वस्नेत, ललिता दोषी र रमेश सुभेच्छुले कविता वाचन गरेका थिए।
२०११ सालमा पौड्यालकै शुभजन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा पौड्यालको रथयात्रा गरिएको थियो । गोपाल पाण्डे असीमको अग्रसरतामा देवकोटा र समसमेत भएर पौड्याललाई रथारोहण गराइएको थियो ।
पौड्यालका दुई दर्जन जति कृति प्रकाशनमा आए । पौड्याललाई मरणोपरान्त २०२६ सालमा त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।